VALIN-KAFATRA - rov@higa
2 Octobre 2011, 10:45am
Filoha RAVALOMANANA Marc : "Tsy tokony mandalo fitsarana intsony ireo gadra politika"
Ravelosona Constant : "Tetezamita tsy fantam-piaviana ny FATE" (+vidéos)
Nitondran'i Raveloson Constant teo amin'ny Kianjan'ny Finoana ny fahasorenan'i TGV momba ny anaram-bositra apetraky ny olona amin'ny tetezamita tsy ara-dalàna ankehitriny. Nambarany mantsy fa na ireo mitonona tompon'ny fahefana tsy mahafantatra marina hoe inona no famaritana ny rafitra misy amin'izao fotoana izao. Midika izany fa tsy mitombona amin'ny toerany velively izao tetezamita izao raha tsy aorian'ny fametrahana ny fanatanterahana ny tondro zotra. Mila apetraka ady hevitra eo amin'ny fiaraha-monina ankehitriny izay fenitra ara-dalàna itondran'ny FATE ny fahefany izaysatria miseho mitsipaka ny petak'anarana rehetra ataon'ny mpiara-belona i TGV.
Inona ary ny andraikitra?
Miomana hatrany amin'ny fitsenana ny Filoha RAVALOMANANA indrindra amin'ny fanilihana ireo rehetra manana hevi-dratsy amin'ny ainy. Dieny izao mantsy dia tokony himasoana izany mba tsy ahafahan'ny ratsy manomana ny tetikadiny. Na izany aza tsy adino ny mamonjy ny fotoana fifampizaram-baovao sy ny mitolona am-bavaka satria efa averimberin'ny vondrom-bavaka eo amin'ny Kianajn'ny Finoana fa "asan'ny maizina no itolomana fa tsy olombelona".
Filoha RAVALOMANANA :"Tohina amin'ny fihetsiky ny FATE ny SADC"
Raveloson Constant Nanao valin-kafatra
Raha ny sitrapon’ny tompony, hoy Raveloson Constant, dia hatao toerana manan-tantara ity kianjan’i Magro ity, satria ity izao no tena Kianjan’ny demokrasia noho ny fanakendana ny fananana sy ny momba antsika rehetra.
Eto no hanambarana ny fisolokiana rehetra natao tany New York ary misy aza mpanao gazety milaza fa raha vao vita ny sonia sy ireny tany New York ireny dia filoham-pirenena Rajoelina. “Miverena ianareo eto ambonin’ny tany fa sady efa tsy tafainga ilay TGV no rendrika ilay sambo koa aza ka milingilingy ho komandin’ny Boeing izany indray !”, hoy i Constant. Mikasika ny fitsenana ny fiverenan’ny filohan’ny FAT teny Ivato omaly indray dia tsotra no fahitan’ity mpanao politika ity azy : “olona tsy faly akory ireny fa voatery mihoraka fa rehefa mandalo satria nokaramaina”. Mikasika ny fiainam-pirenena ankapobeny dia novantaniny fa manjaka tanteraka ny dahalo ankehitriny ary tsy mbola nanana fitaovam-piadiana maro tahaka izao izy ireo ary tsy mbola voavingavinga tahaka izao ny fanjakana nisy teto.
Mifamono ny olona eran’ny tanàna noho ny zavatra tsy misy dikany, fanjakana sy firenena aiza no misy an’izany, hoy ity mpanao politika ity. Tsy misy fitokonana maro tahaka ny tamin’ity andron’i Andry Rajoelina ity ary tsy mametraka daty mihitsy ny mpitokana. Septambra no dinihana ny AGOA eran-tany fa ny an’i Madagasikara kosa amin’ny desambra noho ny kisoniasonia. Mikasika ny tany New York dia notsiahivin’i Constant fa efa hatramin’ny 1960 no naneken’izao tontolo izao ny fisian’i Madagasikara ary i Madagasikara ihany no afaka manala ny tenany ao amin’ny Firenena Mikambana. Mikasika ny filazana fa manaiky hanampy ara-bola sy ara-pitaovana amin’ny fifidianana na ny Firenena Mikambana na ny Vondrona Eoropeanina. Manampy ireo raha fifidianana azo antoka, iarahan’ny rehetra manatanteraka, hoy izy. Notsoriny fa rehefa rava ny fanjakana tsy ara-dalàna, mivoaka ny gadra politika, tsy misy fanenjehana intsony dia hisy ilay fankatoavana iraisam-pirenena. Fa ny mifanohitra amin’izany no miseho izao satria vao vita ny sonia dia nisy ny “NOTAM”, “commando” ho avy any Afrika Atsimo, eny tonga handray New Yorka handray fitenenana. Manaike ny dingana manaraka dia ny fihaonanareo efatra mirahalahy, hoy i Constant Raveloson.
Fankatoavana iraisam-pirenena Aza mamilivily resaka !
“Tafaverina eo amin’ny toerany eo anivon’ny fianakaviambe iraisam-pirenena i Madagasikara(…). Manaiky ny fitondrana ankehitriny ny fianakaviambe iraisam-pirenena, nahazo fankatoavana (…). Tsy hisy sarim-pifidianana (…)”.
Santionany tamin’ny fehezan-tenin’ny filohan’ny FAT tonga an-tanindrazana omaly ireo. Raha tsiahivina dia avy nanatrika ny fihaonambe faha-66-n’ny Firenena Mikambana ny tenany, avy eo nandalo tany Parisy. Manoloana izany dia fanontaniana no apetraky ny mpanara-baovao raha toa ka mody fanina ingahy Andry Rajoelina na manohy ny bontolo fanaony. Iaraha-mahafantatra satria niaraha-namaky ny votoatin’ilay sori-dalana fa raha tsy tanteraka an-tsakany sy an-davany ireo rehetra voalaza ao dia tsy hahazo izany fankatoavana izany velively i Madagasikara. Ny mpampianatra fifandraisana iraisam-pirenena toa an’ingahy Radanoara Julien koa efa nanazava fa tsy midika fankatoavana velively ny fanasana sy ny fandraisana fitenenana eo anoloan’ny firenena mikambana. Firifiry tokoa moa ireo mpitondra fanjakana tsy ankatoavin’izao tontolo izao kanefa mahazo anjara fitenenana ihany. Nialoha an’ingahy Rajoelina dia tsaroana fa ny mpitantana ny fanjakana palestinianina izay tsy mbola ankatoavin’izao tontolo izao no nandray fitenenana. Ankoatra izay dia eo koa ry Mouammar Kadhafi izay niaraha-mahalala fa fanonganam-panjakana no nahatonga azy teo amin’ny fitondrana. Raha tsy hiteny afa-tsy ireo dia familivilian-dresaka ny filazana fa midika fankatoavana iraisam-pirenena ny fandraisam-pitenenana teo anivon’ny Firenena Mikambana sy ny fihaonana tamin’ny Sekretera jeneraly, Ban Ki-Moon. Ny tantara tsy fanadino. Mbola tsy nanana filohan’ny tetezamita i Madagasikara tamin’ny fihaonambe faha-64 ny Firenena Mikambana natao ny septambra taona 2009, na teo aza ny fifanarahana vita tany Maputo 1 sy Maputo 2. Ny fifanarahana vita tany Addis Abeba ny volana novambra 2009 no nametraka an’i Andry Rajoelina ho filohan’ny tetezamita, araka ilay “Acte additionnel”. Koa tsy nahagaga raha tratry ny hoe “sans qualité” izy raha tonga mba handray fitenenana amin’ny anaran’i Madagasikara teo anatrehan’ny Firenena Mikambana.
Nisafidy ny tsy ho avy izy ny taona 2010, fa hoe maika ny fiatrehana ny raharaham-pirenena eto. Nihazakazahana indray ny nandeha tany New York, vao nifanaraka ny vondrona politika ka nanao sonia ny tondrozotra nasiam-panitsiana teny amin’ny Le Paon d’Or, teo anatrehan’ny Troika. Nanao kabary i Andry Rajoelina ny 18 septambra, fa mankato ary vonona hampihatra ny tondrozotra. Ny 19 septambra izy dia nandefa taratasy tany amin’ny Sekretera jeneralin’ny Firenena Mikambana, Ban Ki-Moon, niangavy mafy tamin’ity farany mba handray ny fepetra rehetra hisorohana ny olana ara-diplaomatika toy ny tamin’ny 2009, fa mba te handray anjara fitenenana tamin’iny fihaonambe faha-66 iny, izay hararaotina ilazana ankehitriny fa midika fankatoavana iraisam-pirenena na dia mazava izao aza ny voarakitry ny sori-dalana, fa miandalana izany ary tsy hisy raha tsy tafajoro ny andrimpanjakana iaraha-mitantana ary andraisan’ny rehetra anjara.
Tsy atao mahagaga raha tsy noraisin’ny filohan’ny Kaomisiona Eoropeanina, Maule Barroso i Andry Rajoelina raha nikasa ho any Bruxelles. Tsy atao mahagaga koa ny Vondrona Eoropeanina raha milaza fa mbola “handinika” ny dosie an’i Madagasikara fa tsy hoe : “hanohy ny fanampiana na hampihantona ny sazy”. Ankoatra izay koa dia heverin’ireo mpanara-baovao fa adidy sy andraikitr’ity filohan’ny FAT izay nahatonga an’i Madagasikara nofaizin’izao tontolo izao ny mamerina ity firenena ity amin’ny toerana efa nisy azy hatramin’izay. Nilaza koa i Andry Rajoelina fa anisan’ny tolona natao ny tsy hisian’ny sarisarim-pifidianana. Toa adinony ihany ka ny nitranga tamin’ny kisarina fitsapan-kevi-bahoaka nataony ny 17 novambra 2010 teo. Teo amin’ny tantara manko dia tsy mbola nisy fifidianana nahabe resaka toa iny teto Madagasikara iny. Fitaka sy lainga araka ireo rehetra ireo ny filazana fa nankatoavina ny kisarim-panjakana mijoro amin’izao fotoana izao sy ny filazana fa tafaverina eo anivon’ny fianakaviambe iraisam-pirenena i Madagasikara.
Famahana ny krizy Mbola sarotra ny asa miandry ny SADC
Tsikaritra fa ho sahirana ihany ny SADC amin’ny fandaminana ny raharaha eto Madagasikara satria tsy mbola matotra ny mpanao politika Malagasy.
Seza sy fahefana no mibahana ao an-tsain’ny ankamaroan’izy ireo, ary na ahoana na ahoana endrika tetezamita atsangana eo dia tsy maintsy hisy foana ireo himenomenona fa hoe : tsy nahazo seza, na tsy araka ny tokony ho izy no anjarany. Tapa-bolana izay no voasonia ny sori-dalana, saingy maizina tanteraka ny fampiharana azy. Mifanipaka ny fomba fijerin’ny mpanao politika ireo andininy maromaro voasoratra ao. Samihafa tanteraka ny eritreritr’ireo vondrona politika ny amin’ny fanendrena ny praiminisitry ny marimaritra iraisana, koa inona moa no hoe marimaritra iraisana amin’izany ? Ny mpanara-dia an’i Andry Rajoelina dia tsy mahalala praiminisitra afa tsy Camille Vital, izay raha ailika dia atahorana hanao ampamoaka angamba ! Ny ankolafy 3 manizingizina fa avy amin’izy ireo ny praiminisitra. Mba manantena hahazo io toeraa io koa ny “Autres sensibilités” sy ireo milaza azy fa “Centristes”.
Dia hiandry ny iraky ny SADC indray izany ny fandaminana ny resaka ka asa hoe ahoana ny fomba fiasa ahitana io marimaritra iraisana io, fa raha ny zava-misy hatramin’izao aloha dia sarotra ny fanapahana; ary tena mbola ho mafimafy kokoa ny adihevitra sy ady seza rehefa hiroso amin’ny fanendrena ireo minisitra. Ny efa ao anaty governemanta koa moa tsy te hiala, ny tsy ao anatiny mibosesika hiditra. Ny vondrona politika sasany dia efa nandroso hevitra hoe ataovy 48 ny isan’ny ministera dia mba samy mahatafiditra minisitra daholo ireo nanasonia.
Raha hiverenana kely ny tantara dia tamin’ny 9 martsa 2011 no natao rangopohy teny Ivato ny sori-dalana. Natsangana avy hatrany ny governemanta. Nambara fa amin’ny volana mey 2011 ny sonia. Avy eo indray hoe amin’ny faran’ny volana jona 2011. Nihemotra volana jolay, taty amin’ny volana septambra 2011 vao vita. Mbola maro be ireo adihevitra sy fandresen-dahatra, ary ankehitriny aza ny ankolafy Ratsiraka dia tsy mbola nety nanasonia io sori-dalana io. Midika izany fa tsy tokony hisy fananganana rafitra na fanovana governemanta ato ho ato, fa manasonia aloha io ankolafy iray io izay vao tena tafiditra ao ny maro an’isa. Hery politika tsy azo hamaivanina ny ankolafy Ratsiraka ary tena fahadisoan-kevitra ny fanilihana azy ka hieritreritra hoe hahavita zavatra. Mitohy hatrany, araka izany, ny asa fanelanelanan’ny SADC satria tsy mbola tafavoaka ny ala i Madagasikara fa tena ao anaty krizy tanteraka. Sonia no vita fa ny fanatanterahana azy mbola sarotra. Ary vao maika hanasaro-javatra ny fieboeboana sy fahatokisan-tenan’ny filohan’ny FAT, izay sady midongy kianja, no manonofy hitondra ny baolina samirery hatrany anaty harato, fa tsy hizara amin’ny mpilalao hafa mihitsy.